नेपालमा कहिले आउला कोरोना खोप ? [टिप्पणी]- फिचर - कान्तिपुर समाचार
नेपालमा कहिले आउला कोरोना खोप ? [टिप्पणी]
सरकारले खोप प्राप्तिका लागि गरिरहेका प्रयासहरु फितलो प्रमाणित भइरहेका बेला निजी स्तरमा खोप ल्याउनका लागि चलखेल सुरु भइसकेको छ । त्यही चलखेलका कारण सरकारका प्रयासहरु फितलो भइरहेको हो भनेर आलोचना गर्नेहरुको स्वर पनि सुनिन थालेको छ ।
पुस २०, २०७७ स्वरूप आचार्य
काठमाडौँ — भारतले दुईवटा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई आपत्कालीन प्रयोग अनुमति दिएसँगै नेपालमा पनि छिट्टै खोप उपलब्ध हुनसक्ने आशा पलाएको छ । तर, त्यो आशा वास्तविकतामा परिणत हुनका लागि निकै समय लाग्ने देखिन्छ ।
खोप प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे जानकार स्रोतहरुका अनुसार अहिले नै नेपालीहरु खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नवनियुक्त मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता कोभिड–१९ खोप नेपाल भित्र्याउने रहेको बताए पनि त्यसमा कुनै ठोस काम भएको पाइँदैन । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले खोप खरिदका लागि आवश्यक पर्ने रकम (करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ)को प्रतिबद्धता भने जनाइसकेको छ । तर अहिलेको राजनीतिक तरलताको मार खोप प्राप्तिमा पर्ने देखिन्छ ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले विभिन्न खोप निर्माता देशमा कुटनीतिक नोट पठाइएको र निर्माता कम्पनीहरुलाई पनि पत्राचार गरिएको दाबी गरेका थिए । उनले केही देशले नेपालको कुटनीतिक नोटप्रति सकारात्मक रहेको पनि बताएका थिए । तर, मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार कुनै पनि पक्षसँग औपचारिक रुपमा छलफल अगाडि बढेको छैन । सरकारीस्तरमा धेरै गहिरिएर खोपको विषयमा भारत र रुसका राजदूतहरुसँग मात्रै छलफल भएको छ । चीन पनि नेपालको खोपको आवश्यकतालाई पूरा गर्न कति तत्पर छ भन्ने भविष्यकै गर्भमा छ ।
रुसमा उत्पादन गरिएको खोप ‘स्पुत्निक ५’को प्रभावकारिता र विश्वनीयताबारे यकिन तथ्यांकहरु उपलब्ध नभएको अवस्थामा भारत पहिलो र सहज पहुँचको केन्द्र हो । त्यसमा पनि भारतमा रहेको विश्वकै ठूला मध्येको एक खोप निर्माण गर्ने केन्द्रमा कोभिड–१९ को खोप उत्पादन भएर भारतभर वितरण हुँदा त्यो नेपालसम्म ल्याउन अझ बढी सहज अवश्य नै हुन्छ ।
आइतबार भारतको औषधि नियन्त्रण महानिर्देशनालयले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको ‘कोभिसिल्ड’ र भारत बायोटेक र भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद्को साझेदारीमा विकास गरिएको ‘कोभ्याक्सिन’लाई स्वकिृति दिएको छ ।
यस अनुमतिसँगै भारतमा पहिलो चरणमा तीन करोड जनसंख्यालाई खोप दिने तयारी भएको छ । जसका लागि शनिबार भारतभर ‘ड्राइ रन’ पनि गरिएको थियो । भारतले आफैंले निर्माण गरेको खोप ‘कोभ्याक्सिन’ले तेस्रो चरणको ट्रायलमा कस्तो परिणाम देखायो भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन । तर, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाको सहकार्यमा निर्माण तथा सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’ले भने ७० प्रतिशतसम्म काम गर्ने तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ । यो खोपलाई बेलायतलगायत अन्य मुलुकले पनि प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको भेटमा सिरमका एक उच्च अधिकारीले कम्पनीले खोपको आपूर्तिका लागि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । यस्तै अघिल्लो महिना भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि भारतको खोप उपलब्ध गराउने मुलुकहरुमध्ये नेपाल प्राथमिकतामा रहेको जनाएका थिए । गत बिहीबार बधाई दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अनौपचारिक रुपमै भए पनि खोपका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री त्रिपाठीले व्यक्तिगत रुपमा पनि भारतीय नेताहरुसँग नेपाललाई पनि खोप उपलब्ध गराइदिनका लागि कुराकानी गरिरहेको बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार नेपालले अनौपचारिक रुपमा विभिन्न तहमा खोप प्राप्तिका लागि छलफल गरे पनि औपचारिक रुपमा ठोस पहल भने गर्न सकेको छैन ।
यद्यपि नेपालको पहिलो आशा भनेको गाभीअन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठनले उपलब्ध गराउने खोप नै बनेको छ । विश्वका गरिब मुलुकहरुमा पनि विभिन्न नयाँ खोप सर्वसुलभ तवरले पहुँच पुगोस् भनेर विभिन्न दातृ निकायको सहकार्यमा गाभी सुरु भएको हो । गाभीले केही खोप अंग्रेजी महिनाको मार्चबाट वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले गाभीलाई उपलब्ध गराउने संख्या र प्राथमिकतामा भर पर्छ । नेपालले गाभीबाट खोप प्राप्त गर्नका लागि भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको स्वास्थ्य सचिव लक्षण अर्याल दाबी गर्छन् । तर, कति संख्यामा र कुन खोप नेपाल आउँछ भन्ने यकिन जवाफ उनीसँग पनि छैन ।
कहिले आउँछ नेपालमा खोप ?
नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपालमा कसैसँग पनि छैन । सरकारले खोप प्राप्तिका लागि गरिरहेका प्रयासहरु फितलो प्रमाणित भइरहेका बेला निजी स्तरमा खोप ल्याउनका लागि पनि चलखेल सुरु भइसकेको छ । त्यही चलखेलका कारण सरकारका प्रयासहरु फितलो भइरहेको हो भनेर आलोचना गर्नेहरुको स्वर पनि सुनिन थालेको छ ।
ती स्रोतका अनुसार एक घरानीया व्यापारिक समूहले भारतको सिरमले उत्पादन गरेको खोप प्राप्त गर्न भारतीय पक्षलाई नै पनि राजी गराइसकेको छ । ‘एउटा ग्रुपले सिरमसँग कुरा मिलाइसक्यो भन्ने सुनेको छु । त्यसैले एस्ट्राजेनेकाका उच्च अधिकारीसँग अनलाइनमा वान टू वान छलफल गर्ने भनेर तय भएको कार्यक्रम रद्द गरेर मेल मात्र पठाउने तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै स्रोतका अनुसार सरकारले मोर्डेनाका उच्च अधिकारीसँग पनि खोप प्राप्तिका लागि ‌औपचारिक छलफलको प्रयास गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी अनौपचारिक कुराकानीमा बताएर अनुसार सरकार केही गरी आफ्नो पहलमा खोप ल्याउन सफल भएन भने निजी क्षेत्रलाई आयात गर्नका लागि दिने मानसिकतामा छ । तर, सो खोप सरकारले नै खरिद गरेर निशुल्क लगाउने छ । 'ल्याउन त जसले ल्याएपनि हुन्छ नि । लगाउन कसले पाउँछ भन्ने पो मुख्य कुरा हो,' ती अधिकारीले भनेका थिए ।
एकातर्फ गाभीका लागि सबैभन्दा धेरै खोप दिनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इण्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदर पुनावालाले मार्च–अप्रिलमा मात्रै त्यो सम्भव हुने बताइसकेका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमलाई उनले दिएको प्रतिक्रियाअनुसार भारतीय सरकारले त्यहाँको जनसंख्यालाई पुग्ने खोप उत्पादन भएपछि मात्रै बाहिर निर्यात गर्ने सर्तमा सो खोपलाई अनुमति दिइएको हो ।
उनको यो प्रतिक्रियापछि नेपालले गाभीबाट खोप पाउने समय थप लम्बिने निश्चित भएको छ । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई मनाउन सकेमात्रै केही मात्रामा खोप प्राप्त गर्न सकिन्छ । नभए सिरमसँग खोप नै किन्ने बाटो पनि अहिलेका लागि बन्द भएको छ ।
अर्कोतर्फ भारत सरकारले बिना कुनै ठोस प्रमाण सार्वजनिक हुनुपूर्व नै अनुमतिदिएको ‘कोभ्याक्सिन’ खोप नेपाललाई दिने प्रप्ताव गरे लिने कि नलिने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि छ । त्यसतर्फ पनि नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विशेषज्ञहरुले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
यद्यपि कुन खोप नेपालका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ भन्‍ने विषयमा विशेषज्ञहरूले नै स्पष्ट पार्न उचित हुन्छ ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७७ १८:३३